Ny fanjakan'ny automatisation marketing 2015 | Martech Zone
Ny State of Marketing Automation 2015
Alarobia, Febroary 4, 2015 Talata, Febroary 3, 2015 Douglas Karr
Tsy misy isalasalana ny amin'ny herin'ny automatisation marketing fa teny somary manjavozavo sy be loatra izay hampiroboroboana ny sehatra rehetra… saingy vitsy ny manasongadina ireo fiasa sy fotoana mety rehetra. Ny sasany dia mampiasa azy fotsiny ny fahazoana, ny varotra ihany, ny marketing, ny fitazonana. Ny sehatra hafa dia tsy manana singa manan-danja toy ny scoring lead na integrations. Ary, araka ny asehon'ity sary ity, orinasa maro no tsy mahita an'ity tombony amin'ny automatisation marketing avokoa.
Androany amin'ny fipoahan'ny fantsona nomerika sy ny haitao dia manimba anao amin'ny safidinao amin'ny maha mpivarotra dizitaly anao. Ny automatisation marketing dia afaka manampy amin'ny fomba mahomby amin'ny fametrahana ny zavatra ho amin'ny fomba fijery mba hijanonanao eo ambonin'ny zava-drehetra. Mandehana mamaky an'ity infografia manazava ity mba hahazoana fomba fijery anatiny momba ny tontolon'ny automatisation marketing izao. Team Position²
Noho ireo antony ireo dia tsy manoro hevitra ireo mpanjifanay izahay mba handeha miaraka fotsiny tsara indrindra amin'ny karazany vahaolana amin'ny automatisation marketing. Matetika aho no mivazivazy fa ny fivarotana vahaolana amin'ny automatisation marketing dia mitovy amin'ny fivarotana vata fampangatsiahana amin'ny olona mosarena… tsara nefa tsy manampy izany raha tsy manana sakafo hapetraka ao izy ireo. Io sakafo io no paikady sy atiny ary koa fotoana fampiharana, fitsapana ary fanadiovana ny vokatra. Ny sehatra sasany dia mitaky loharanom-pahalalana na fampidirana izay; Raha tsy izany dia tsy hahazo ny tambiny feno amin'ny fampiasam-bola.
Zava-dehibe ny hamaritanao sy ny fanombatombanana ny fizotranao anatiny sy ivelany, ny dia ataon'ny mpanjifanao, ny loharano ary ny loharano ara-barotra alohan'ny hanaovana sonia ny vahaolana amin'ny automatisation marketing!
Tags: automation marketinginfographic automatisation marketingtoerana2fanjakana automatique marketing